Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 77
Nepali New Revised Version, Psalms 77
1 मैले सहायताको निम्‍ति परमेश्‍वरमा पुकार गरें। उहाँले मलाई सुनून्‌ भनेर मैले परमेश्‍वरलाई पुकारें।
2 मेरो दु:खको घड़ीमा मैले परमप्रभुलाई खोजें, राती नथाकी मेरो हात पसारें, अनि मेरो प्राणले सान्‍त्‍वना ग्रहण गर्न चाहेन।
3 हे परमेश्‍वर, मैले तपाईंलाई सम्‍झें, र अफसोस गरें, मैले चिन्‍ता गरें, र मेरो आत्‍मा शिथिल भयो। सेला
4 तपाईंले मेरा आँखा लाग्‍न दिनुभएन, म यति दु:खित भएँ, कि बोल्‍न पनि सकिनँ।
5 बितेका दिनहरू, धेरै पुराना वर्षहरूको मैले सम्‍झना गरें।
6 राती मैले आफ्‍ना गीतहरू सम्‍झें, म ध्‍यानमा बसें, र मेरो आत्‍माले यो सोध्‍यो:
7 “के परमेश्‍वरले सदाको निम्‍ति इन्‍कार गर्नुहुन्‍छ, र उहाँले फेरि कहिल्‍यै निगाह राख्‍नुहुन्‍न?
8 के उहाँको अचूक कृपा सदाको लागि भेटिएको छ? के उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्‍ति समाप्‍त भएका छन्‌?
9 के परमेश्‍वरले दया गर्न बिर्सनुभएको छ? के रिसाएर उहाँले आफ्‍नो कृपा-दृष्‍टि बन्‍द गर्नुभएको छ? सेला
10 अनि मैले सोचें, “यस कुरामा म अपिल गर्छु: सर्वोच्‍चको दाहिने बाहुलीका वर्षहरू।”
11 परमप्रभुका कार्यहरूको म स्‍मरण गर्नेछु, निश्‍चय नै तादिका तपाईंका आश्‍चर्यकर्महरू म सम्‍झनेछु।
12 म तपाईंका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु, र तपाईंका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि चिन्‍तन गर्नेछु।
13 हे परमेश्‍वर, तपाईंका मार्ग पवित्र छन्‌, हाम्रा परमेश्‍वरझैँ महान्‌ देव अरू को छ?
14 तपाईं आश्‍चर्य कामहरू गर्ने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, तपाईं आफ्‍नो सामर्थ्‍य मानिसहरूका बीचमा प्रकट गर्नुहुन्‍छ।
15 तपाईंले आफ्‍नो बाहुलीको शक्तिले आफ्‍ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, याकूब र योसेफका सन्‍तानहरूलाई। सेला
16 हे परमेश्‍वर, समुद्रको पानीले तपाईंलाई देख्‍यो, जब पानीले तपाईंलाई देख्‍यो, त्‍यो मड़ारियो। अथाह सागर कम्‍पायमान भयो।
17 बादलहरूले पानी खन्‍याए, आकाशमा भयङ्कर रूपले गर्जन लाग्‍यो, तपाईंका बाणहरू चारैतिर चम्‍कन लागे।
18 तपाईंको गर्जन आँधीबेहरीमा सुनियो, तपाईंको बिजुलीले संसारलाई आलोकित पारिदियो, पृथ्‍वी कम्‍पित भएर हल्‍लियो।
19 तपाईंको बाटो समुद्र भएर गयो, र तपाईंको पथ महासमुद्रको बीचमा थियो, यद्यपि तपाईंका पाइलाहरू देखिएनन्‌।
20 मोशा र हारूनका हातद्वारा तपाईंले आफ्‍नो प्रजालाई भेड़ाको एउटा बगाललाई जस्‍तै डोर्‍याउनुभयो।
Psalms 76 Choose Book & Chapter Psalms 78